မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): January 2014
beautiful logo sit
မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ သူကတော.ဒေါင်းလော့ဖရီးပေးပါတယ် လိုဂိုပုံ
အွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တာကောအစုံပါပဲ ဘလော.ဂါလိုဂိုတို. ၀ူးဒါးပတ်
လိုဂိုတိုလဲဆိုဒ်မှန်နဲ.ရပါတယ် တော်တော်ကောင်းပါတယ် သွားချင်ရင်တော့
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 10:43:00 AM0မှတ်ချက်
အရမ်းကောင်းပါတယ်ဖုန်းအတွက်ပေးတာပါ။ 3gp / avi / mp4 ဖော်မတ်စုံစုံနဲ.ရပါတယ်
သွားပြီးဒေါင်းကြည့်ချင်ရင်တော့ http://o2cinemas.com/ နော်
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 10:41:00 AM2မှတ်ချက်
CyberLink PowerProducer Ultra v6.0.2406 For All Win 542.13 MB
ဗီဒီယို ဓတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ် ရုပ်ရှင်ဖန်တီး စသည့်ဖြင့် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်
အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် Template ပါတင်ပေးထားပါတယ်
Template Packs (Size: 489.57 MB)
Author Unknown at 8:04:00 PM0မှတ်ချက်
Connectify Hotspot PRO v7.1.0.29279 (ကွန်ပြူတာကနေ Wifi ပြန်လွှင့် ဖို့ ဆော့ဝဲလ် အလန်းလေး)
မိမိသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာမှ သူငယ်ချင်းတွေကို အင်တာနက် ခွဲပြီးပေးသုံးချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကလည်း အရမ်းကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ WiFi ကော်နက်ရှင်းကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် Connectify Hotspot PRO က Connect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Wireless သုံးသူများလဲ ကိုယ့်စက်မှာ Wireless Driver မရှိရင်၊ အလုပ်မလုပ်ရင် ဒီဆော့ဝဲနဲ့ ကော်နက်ရှင်း လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Connectify Hotspot PRO ရဲ့ အားနည်းချက်တခုက မိမိသုံးနေတဲ့ Window မှာ Framework Net 4.5 ရှိနေရပါမည်။ Framework မရှိသော Window တွေမှာ Install လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီနေက်ပိုင်း Window တွေအားလုံးနီးပါး Framework ပါပြီးသားမို့Connectify Hotspot PROကို အဆင်သင့် Install ရုံပါပဲ။ Connectify Hotspot PRO ကို Install နည်းကို အောက်မှာရေးပြထားပေးပါတယ်။
Framework Net 4.5 မရှိသော သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းပြီး Install ပြီး Connectify Hotspot PRO ကို စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဆော့ဝဲလ် ကိုဝင်ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
-အင်စတောပြီးလို့ Restart ချခိုင်းရင် I want to manually reboot later ကိုရွေးပြီး ဘောက် ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
-ပြီးရင် Crack ဖိုင်မှ crack အားလုံးကို Select All နဲ့ Copy ပေးပြီး C:\_Program Files \_Connectify\_ မှာ Paste လုပ်ပါ။ ဘောက်၂ခု ကျလာရင် အပေါ်က Copy And Replay ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
-ပြီးရင် စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ။ ပြန်ပွင့်လာရင် Full Version အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
-Update လုပ်ရန် ပြောလာတိုင်း Cancel ကိုကလစ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။ Update လုံးဝ လုပ်လို့မရပါ။
Download Connectify Hotspot PRO v7.1.0.29279
Author ဇော် မင်း သန်း at 4:12:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း
Gtalk ,Facebook တို့ လို Viber ကို Off Line ထားပီးသုံးချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲသုံး
ဒီဆော့ဝဲလေးသုံးရတာ ကောင်းတာမလို့ ပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ် ချက်တင်က
စာမပြန်ရင် အွန်လိုင်းကြီး ရှိရဲ့သာနဲ့ စာမပြန်ဘူး မနေ့ ညက ဘယ်ချိန်အိပ်
Viber မှာ last online 4နာရီပြနေတယ်ဆိုတာတွေ မရှိတော့အောင်ဒါသုံးပါ
အမြဲတမ်း Offline ထားချင်သူ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူသုံးပါ
Author Maungssk at 5:34:00 PM2မှတ်ချက်
Labels: Viber နဲ့ ဆိုင်သော ပညာများ
ဒီဇိုင်း အလန်းလေးနဲ့ Windows XP Pro SP3 2010 (32-Bit) SOFTVNN V5.0 +All Mainboard & Auto Drivers (685 Mb)
ဒီဇိုင်းအသစ်လေးနဲ့ တကယ်လန်းတဲ့ Windows XP Pro SP3 2010 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Windows XP Edition က 2010-ခုနှစ်ကထွက်တာပါ။ အဲဒီတုံးက V 3.0 အဖြစ်ထွက်လာခဲ့ပြီး
2013 မှာ Modify ပြန်လုပ်ပြီး Version အသစ် V 5.0 ပြန်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ XP Edition မှာ Mainboard Drivers များ၊Audio Drivers များ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
-RAR ဖိုင်ကို WinRAR ဖြင့် extract လုပ်ပါ။
- RAR Password - www.linthit.com
-ရလာတဲ့ ISO ဖိုင်ကို Power ISO ဖြင့် CD disc မှာBootable Image အဖြစ် Burn ပါ။
(Activated လုပ်ပြီးသား ဆိုပေမဲ့ တချို့စက်တွေမှာ Activate မဖြစ်ရင် Activator ကိုပါဒေါင်းယူ
ပြီး Activate လုပ်ပါ။)
Author ဇော် မင်း သန်း at 6:55:00 PM0မှတ်ချက်
IOS7အတွက် အလန်းစား 77 (seventy seven theme)
iPhone 4,4s,5,5c နဲ့ 5s iOS7အတွက် တော်တော် လန်းတဲ့ Themes လေးတစ်ခုပါ။
Premium Theme တစ်ခုပါ။ http://repo.insanelyi.com/ မှာ Free ရယူနိုင်ပါတယ်ဗျ။
ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ နဲ့ အတူ
77 Nature-Wallpaper add-on
77 Sky-Wallpaper add-on
77 Theme PSDs
အဲတာလေးတွေပါ တစ်ခါတည်း Download လုပ်လိုက်ရင်တော့ တော်တော် ကို ပြီးပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
Author Unknown at 1:36:00 AM0မှတ်ချက်
iOS7နှင့် ကိုက်ညီသော Tweaks များ
The tweaks which is Compatible with iOS7(Also Supports 64 bit device)
(2) Activity Pro
(5) AppSync For iOS 7.0 +
(11) BytaFont2for iOS 7
(12) Call Recorder
(14) CC Setting
(17) Flex 2
(18) Gridlock 2.0
(19) Icon Renamer
(22) iOS7Slider Logo Packs
(24) Messages Customiser
(25) MMKeyboard for iOS 7+
(26) Movie Box
(28) QuickGestures 2
(29) SBRotator 7
(35) Universal Video Downloaer
(37) Virtual Home
(39) Zawgyi Font iOS7
တစ်ခု ချင်းစီ ရဲ့ အသုံးဝင် ပုံများကိုလည်း သီးသန့် Post တင်ကာ ရှင်းပြပေးသွားပါအုံးမယ်ဗျ။
အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ ^_^
Author Unknown at 1:16:00 AM0မှတ်ချက်
Genuine အဖြစ် Activate လုပ်ပြီးသား -Windows7SP1 x86-x64 [Rus-Eng] 18in1 IE11 +.PreActivated (4.50 GB) Window7All Editions
Windows7ISO ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်ယူ၍ မရသူများ ၊ ဆိုင်မှာအခွေဝယ်ပြီးသုံးနေရ
သူများ အတွက် Windows7All in One ISO ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Windows7All in One
ISO ဖိုင်မှာ Russian နဲ့ English ဘာသာ ၂-မျိုးနဲ့ Windows Editon 18-ခု (Russian 9+English 9)
ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့အတွက် RAR (၈) ဖိုင်ခွဲပြီးတင်ထားပေးပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ Editions များကတော့..
- Windows7Starter SP1 Russian....တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Editions အားလုံးမှာ IE 11,Net Framework 4.5.1,DirectX 9.0 တို့ Included လုပ်ထား
ပေးပါတယ်။ PreActivated လုပ်ထားပေးပြီး ဖြစ်လို့ Windows Activator ဖြင့် Activate လုပ်ရန်မလိုပါ။
RAR Password - www.linthit.com
-Extract လုပ်ပြီး ISO ဖိုင်ကို Power ISO ဖြင့် DVD (သို့) USB (8 GB) မှာ Bootable Image အဖြစ် Burn ပြီး Windows တင်နိုင်ပါပြီ။
-ပထမ..My Language ကို ရွေးပါ။
-ဒုတိယ..Windows7Edition ကိုရွေးပြီး ဝင်းဒိုးတင်ပါ။
Author ဇော် မင်း သန်း at 1:36:00 PM0မှတ်ချက်
Google Play Store က App တွေကို Google Chrome နဲ့ ဒေါင်းယူနည်း
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Google Play Store က App တွေကို Google Chrome နဲ့ ဒေါင်းယူနည်းလေး ပြောပြပေးပါမယ်။
ကွန်ပျူတာ အသုံးများတဲ့သူတွေဆိုရင် ဖုန်းကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်သိချင်တာ လိုချင်တာ ရှာရတာ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။
ဒီနည်းလေးကတော့ Google Chrome ကို Add On လေးတစ်ခု ထည့်ပြီး Play Store က App တွေကို ဒေါင်းယူတာပါ။
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 8:22:00 PM2မှတ်ချက်
YOUTUBE ကဗီဒီယိုတွေကို ဘာဆော.၀ဲလ်မှမလိုပဲဒေါင်းကြမယ်
YOUTUBE DOWNLOADER တွေကတစ်ကယ်တော.သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူးဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော.
နံပါတ်(၁) အနေနဲ. http://www.youtube.com/ ကိုဝင်ထားရပါမယ်
နံပါတ်(၂) ကတော့ http://ytconv.net/ ကိုသွားပေးရပါမယ်
ကဲအဲလိုတွေရပြီဆိုတာနဲ. အောက်မှာကိုယ်လိုချင်တဲ.ဖော်မတ်ကို အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါ။(ဥပမာMP3.MP4
နံပါတ်(၃) အနေနဲ.ကတော်YOUTUBE ကကိုယ်ကြိုက်တဲ.ဗွီဒီယိုလေးကိုထောက်
RIGHT CLICK >>> COPY VIDEO URL ပေါ.နော်
ကဲအဲဒီအဆင်ထိ၇လောက်ပြီ ခိခိ အဟမ်း ကြော်ငြာနဲနဲဝင်မယ် သီချင်းကြိုက်တဲ.သူငယ်ချင်းတွေဒီကိုလာလည်နော်
ကဲအခုအဆင်(၄)ကိုသွားကြမယ် အပေါ်က copy video URL ကိုလုပ်ပီးpဆိုရင်
အောက်ကပုံလေးအတိုင်း right click>>>paste လုပ်ပါ
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 8:03:00 PM6မှတ်ချက်
Author ဇော် မင်း သန်း at 1:34:00 PM5မှတ်ချက်
Author ဇော် မင်း သန်း at 11:39:00 AM0မှတ်ချက်
MMSD Smart Zawgyi v1.5 (Android version 1.6 မှ 4.2.2 အထိ မြန်မာစာမှန်တဲ့ ZawGyi Font Changer ဆော့ဝဲလ်လေး ဖြစ်ပါတယ်)
ဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ MMSD Smart Zawgyi လေးကတော့ Android ဖုန်းတွေ မြန်မာဖောင့် သွင်းလို့ ရတဲ့ Font Changer လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် မြန်မာဖောင့် ထည့်ချင်တဲ့ ဖုန်းက Root Acees! ဖြစ် ဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ MMSD Smart Zawgyi ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးစားတွေကတော့ Root Access ဖြစ်ပြီးသား Huawei, HTC, Sony, Samsung အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
Andriod Version 1.6 အထက် မှ 4.2.2 အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Android Version 4.2.2 တွေမှာ မြန်မာ စာ မမှန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ MMSD Smart Zawgyi Font Changer လေး စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးမှ မြန်မာစာမမှန်ရင် တခြား Font Changer တွေလည်း မြန်မာစာ မမှန်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတချို့ က မြန်မာစာမမှန်လို့ တောင်းထားတာနဲ့ ဒီကောင်လေး တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Download MMSD Smart Zawgyi
Author ဇော် မင်း သန်း at 1:16:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက်မြန်မာဖောင့်, Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန်
ထိုင်းက12Call ရိုးရိုးစင်းကဒ်ကို3G 2100 SIM အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
3G လိုင်းမိလားမမိလားစမ်းချင်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် 3Gစင်းကဒ်ကဝယ်ရပါပြီ
ဝယ်ရင် ပိုက်ဆံကုန်တာပေါ့ ခုဟာကမကုန်ဘူးနော် လွယ်လွယ်လေးဘဲ
ကဲပြောပြမယ်နော် အော်တခုပြောရအုန်းမယ် ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ထိုင်းဆေးရုံဘတ်ရှိဖို့
လိုအပ်ပါတယ်.....ဆေးရုံဘတ်မှာပါတဲ့ နံပါတ် ၁၃လုံးကိုအသုံးပြုရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်
ဆေးရုံဘတ်တခုရှိယုံနဲ့3G 2100 SIMစင်းကဒ်များစွာလုပ်လို့ရပါတယ်
(*988*... ဆေးရုံဘတ်နံပါတ် (၁၃)လုံးထည့်ပေးပါ ...#)
နှိပ်လိုက်ပြီးခဏနေစာအိပ် တလုံးရောက်လာပါမယ်...3G 2100နဲ့*988*2#ပါတဲ့
စာအိပ်မရောက်သေးရင် ၁၅မိနစ်လောက်စောင့်ခိုင်းပါတယ် စာအိပ်ရောက်မှဖုန်းကို
ပိတ်ပါ....ကဲပြီးပါပြီ ဖုန်းပြန်ဖွင့်ပြီးရင် သင့်ဖုန်းက 3G လိုင်းပါတယ်ဆိုရင်စမ်းသပ်ကြည့်
လိုက်ပါ........ သင်လုပ်လိုက်တဲ့12Call ရိုးရိုးစင်းကဒ်လေးက ခုဆို
AIS 3G2100 စင်းလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကို သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
တခုပြောချင်ပါတယ် 3G လိုင်းမိမမိစမ်းချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းမှာ 3Gလိုင်းရှိဖို့တော့
လိုအပ်ပါတယ် ..3G လိုင်းရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းထဲမှာလာပေါ်မှာပါ
အော် တခါတည်းပြောအုံးမယ် 3Gစင်းလည်းဖြစ်ပြီ လိုင်းကလည်းမိတယ်ဆိုရင်
ပါပြောပြလိုက်မယ်...လိုင်းအား 384kbps နဲ့24နာရီဆော့မှ ၁၄ ဘတ်ဘဲပေးရပါတယ်
လုံးတညလုံးတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ ည၁၂နာရီဆိုကုန်ပါမယ် တန်လည်းတန်ပါတယ်
Author Unknown at 2:17:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author ဇော် မင်း သန်း at 1:35:00 PM0မှတ်ချက်
Blogger သူငယ်ချင်းများအတွက် Post မှာ Auto Read More ပြုလုပ်နည်း
အခု Post လေးကတော့ Blogger ညီကိုများအတွက်သီးသန့် Post လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှစပြီး Blog ကိုလေ့လာနေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ။ Post တွေမှာ Jump Break လုပ်စရာ မလိုဘဲနဲ့ Auto Read More ဖြစ်နေစေမယ့် HTML Code ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်ရတာလည်းအတော်လေးလွယ် ကူပါတယ်။ အအောက်မှာပုံနဲ့တကွအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ကြ ရအောင်ဗျာ။ လူတိုင်းလွယ်ကူစွာလိုက်လုပ်နိုင်အောင်လို့ အသေးစိတ် တဆင့်ခြင်းရေးပြပေးထားပါတယ်။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Dashboard > Template > Edit HTML ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ။
Control + F နှိပ်ပြီး Search Box မှာ</head> ကိုရှာလိုက်ပါ
တွေ့ပြီဆိုရင် </head> ရဲ့ အပေါ်မှာ အောက်က Code ကို Copy to Paste လုပ်ပေးပါ။
var noImgSum = 200;
imgSum = 450;
iHt = 250;
iWd = 250;
var summ = noImgSum;
imgtag = '<img id="autoReadMoreImg" src="'+img.src+'" width="'+iWd+'px" height="'+iHt+'px"/>';
summ = imgSum;
နောက်ထပ် Search Box မှာအပေါ်ကပုံအတိုင်း <data:post.body/> ဆိုပြီး ထပ်ရှာကြည့်ပါ
တွေ့ပြီဆိုရင်<data:post.body/> ကို Select ပေးပြီး အောက်က Code ကို Copy to Paste နဲ့အစားထိုးပေး လိုက်ပါ။
<a id='readmore' expr:href='data:post.url'>Read More ...</a>
ဒါဆိုရင်တော့ Auto Read More အတွက် လုပ်ဆောင်ရမှာကပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီနေရမှာ မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင် ဆင်နိုင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာ ပေးထားတဲ့ Code လေးကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရမှာ 200 ဆိုတာ ပုံနားမှာပေါ်မယ့်စာလုံးရဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ imgSum = 450;
ဒီနေရာမှာ 450 ဆိုတာက Post မှာ Read More မတိုင်ခင်မှာပေါ်စေချင်တဲ့စာလုံးအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ iHt = 250;
ဒီနှစ်ခုကတော့ Post မှာပေါ်မယ့် ပုံရဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်စရာရှိတာတွေလည်းပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Save Template မနှိပ်ခင်မှာ Preview Template ကိုအရင် နှိပ်ပြီး Preview ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Error မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှ Save Template ကိုနှိပ်စေချင် ပါတယ်ဗျာ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပြေနဲ့လိုက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြ ပါစေနော်။
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 12:53:00 AM0မှတ်ချက်